Khasaarihii ka dhashay dagaalkii Galkacyo oo sii siyaaday iyo xaaladda magaalada oo caawa deggan. – Radio Daljir
Khasaarihii ka dhashay dagaalkii Galkacyo oo sii siyaaday iyo xaaladda magaalada oo caawa deggan.
Galkacyo, Oct 29- Waxaa sii siyaadaya khasaarihii ka dhashay dagaalkii maanta ka dhacay suuqa magaalada Galkacyo ee xarunta gobolka Mudug, kaasi oo u dhaxeeyey ciidamada ammaanka magaalada Galkacyo ee maamulka Puntland iyo ciidan hubaysan oo la tilmaamay in ay taabacsan yihiin maamulka Galmudug.
Dagaalkaan oo bilowday barqanimadii maanta ayaa soo gaaray illaa gabal-gaabkii, waxaana uu gaystay khasaarooyin iskugu jira dhaawac iyo dhimasho, waxaana inta la xaqiijiyey labada dhinacba ku dhimatay illaa 9 qof halka in badan 50 kalana ay ku dhaawacmeen.
Isbitaalka GMC ee magaalada Galkacyo oo ay galabta tageen qaar ka mid ah wariyaasha idaacadda Daljir ayey kula soo kulmeen dhaawac gaaray illaa 43 qof, halka illaa 4qof oo mayd ahna ay taallay isbitaalkaasi, waxaana saraakiisha caafimaadka ee isbitaalkaasi ay sheegeen in tiro kale oo dad ah oo qabay dhaawacyo fudud ay isbitaalka ka baxeen kadib markii la hubiyey xaaladdooda caafimaad.
Dr. C/qaadir Maxamuud Jaamac (Dhaga-cadde) oo ah guddoomiyaha isbitaalka GMC oo ay la xiriirtay idaacadda Daljir ayaa sheegay xaaladda dadka dhaawaca ah badankoodu in ay tahay mid wanaagsan oo ay soo gaareen dhaawacyo sahlan inkastoo dirtoorku uu sheegay in ay jiraan dhowr qof oo xaaladdoodu ay aad u liidato.
Dhanka kale isbitaalka ku yaalla xaafadda Wada-jir ee magaalada Galkacyo oo aan xiriir la samaynay ayaa naloo sheegay in la gaarsiiyey illaa 4 qof oo dhimasho ah halka dhaawacana ay ku tilmaameen illaa 13 qof.
Qaar ka mid ah xaafadaha magaalada Galkacyo ayaa la sheegayaa in ay jiraan dad dhaawac ah oo lagu hayo kuwaasi oo la tilmaamay in ay soo gaareen dhaawacyo fudud.
Sikastaba ha ahaatee iska hor imaadkii maanta oo ahaa mid ka kacay bam-baanooyin lagu weeraray ciidanka nabad-galyada ee magaalada oo ku guda jiray hawlgallo waddo bannayn ah, ayaa abuuray khalkhal xagga ammaanka ah taasi oo dad badani ay walaac ka muujiyeen.
Qaar ka mid ah waxgaradka iyo culimada dhinacyada magaalada Galkacyo ayaa haatan ku hawlan sidii xaaladda loo qabooyin lahaa loogana hortagi lahaa dagaal kale oo sababi kara dhimasho iyo dhaawac ka badan intii maanta.